သင့်တွင် Mac Pro ရှိပြီး ဘီးများကို ဝယ်ယူလိုပါသလား။ ဤ 58% လျှော့စျေး | ကျွန်တော်က mac ကပါ။
သင့်တွင် Mac Pro ရှိပြီး ဘီးများဝယ်ယူလိုပါသလား။ ဤ 58% လျှော့စျေးကို အခွင့်ကောင်းယူပါ။
Apple ၏ Mac Pro ဘီးများ ကုန်ကျခဲ့သည့် ယူရို 800 ကျော်ကို ပေးဆောင်ရခြင်းမှာ အမှန်တကယ် ရူးသွပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရသည်။ သတင်းကောင်းမှာ 2020 ခုနှစ်တွင် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော လေးဘီးတပ်ကိရိယာသည် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောပါဝါကို ပေးစွမ်းနိုင်သော သို့မဟုတ် လေးလံသောစက်ပစ္စည်းများတွင် ၎င်းတို့ပေးဆောင်သည့် ရွေ့လျားနိုင်မှုထက် သာလွန်ကောင်းမွန်စေမည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းမဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်တကယ်မတန်တဆဖြစ်ပါတယ်။. ယခုအခါ Apple wheel kit ကို မူရင်းစျေးနှုန်း၏ 50% ထက် ပိုလျှော့စျေးဖြင့် တွေ့ရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒီဘီးတွေကို ယူရို 350 ကျော်နဲ့ ဝယ်လို့ရပါတယ်။.
ထက်ဝက်ကျော် ဖြတ်တောက်ထားသော်လည်း ဈေးကြီးနေသေးသည်။
သိသာထင်ရှားသော လျှော့စျေးထက် ကျော်လွန်၍ နာမည်ကြီး Amazon စတိုးတွင် ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ဤ Mac Pro ဘီးအစုံအတွက်၊ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက် အလွန်စျေးကြီးနေသေးသည်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ် ဤဘီးအစုံကို Apple ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ယူရို 800 ကျော်ဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းစတိုးတွင် လျှော့စျေးသည် ကောင်းမွန်သော်လည်း အချို့သောဘီးများဖြင့် အနည်းငယ်ချဲ့ထွင်ပုံရသည်။
Amazon တွင် ဤထုတ်ကုန်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည့် ရယ်စရာကောင်းသော မှတ်ချက်များအပြင် သော့ချက်မှာ အဆိုပါ Mac Pro များထဲမှ တစ်ခုကို ဝယ်နိုင်သူများဖြစ်သည်။ ယခုသူတို့သည် "ပိုမိုတင်းကျပ်သောစျေးနှုန်း" ဖြင့်ဘီးများကိုယူရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ အနည်းဆုံး။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဤကမ်းလှမ်းချက်မျိုးဖြင့် အမြဲပြောလေ့ရှိသည့်အတိုင်း ၎င်းတို့သည် ဤစျေးနှုန်းဖြင့် အမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ လက်ရှိကမ်းလှမ်းချက်ကို သင်ရှာမတွေ့သည်ဖြစ်စေ ဤဆောင်းပါးကို သင်ဖတ်သည့်အခါပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ယနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 18 ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ 2021 ခုနှစ် လောလောဆယ်တွင်၊ Mac Pro အတွက် ဤဘီးများကို ယူရို 350 ကျော်ဖြင့် သင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » Mac Pro » သင့်တွင် Mac Pro ရှိပြီး ဘီးများဝယ်ယူလိုပါသလား။ ဤ 58% လျှော့စျေးကို အခွင့်ကောင်းယူပါ။
ဂျာမနီနှင့် စပိန်ရှိ Apple Maps သည် သုံးစွဲသူများအား မတော်တဆမှု သတင်းပို့ရန် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
Apple Music သည် LG Smart TV များအတွက် ၎င်း၏ အပလီကေးရှင်း ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။